Fanaovana Bango Tokana ny Blaogy Aziatika Tatsimo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2018 3:08 GMT
- Mizara karazana Bangladesh mampiavaka & tokana avy amin'ny fandinihana manokana tao anatin'ny lahatsoratra antsoina hoe ”Fantatrao fa Bangla ianao rehefa *@#!!” (rohy tapaka) ny Subhan. (Azonao atao ihany anefa ny mahita izay toetoetra izay ato anatin'ity rohy napetraky ny mpandika ity)
- Manadihady (rohy tapaka) vaovao mikasika ny ”fanambadiana pelaka Miozolomana voalohany indrindra tao Pakistana” ny Arafat of ‘Anthology’ araka ny resaka teo aloha mikasika izany izay manambara fa :
(Azonao atao ihany anefa ny mahita mikasika izany ato anatin'ity rohy an'i Harry Potar napetraky ny mpandika ity):
”Mifanohitra tanteraka amin'ny finoana Krisitana, izay mihevitra ny fahapelahana ho toy ny aretinny tsy fahatomombanan'ny toetra ary mihevitra ireo pelaka ho tsy araka ny tokony ho izy, olona vetaveta, dia mandray fitondrantena lefilefy kokoa ny fehezandalàna Silamo, izay mihevitra ny fifanintonana misy amin'ny olona mitovy fananahana amin'ny tena ho toy ny ara-dalàna sy voajanahary tanteraka.”
- Mitrandraka ny mety hananganana fantsona onjam-peo FM mifantoka amin'i Dhaka i Asif, izay manely fanehoankevitra mivantana mikasika ny fifamoivoizana ao Dhaka amin'ny alalan'ny fijerena ny fifamoivoizana ampiasàna ny teknolojia GPS.
- Miresaka mikasika ny herin'ny tsianjery ao amin'ny blaoginy ”Aingam-panahy sy Eritreritra Mpamorona” i Sadiq ary mamoaka ‘vavaka tsara tarehy ho an'ny Ramadan’.
- Tezitra amin'ny fanapahankevitry ny Fitsarana Avon'i Delhi i Neha hoe azo ekena ny fanambadian'ireo zazavavy 15 taona. (Tapaka ny rohy avy amin'i Neha, fa azonao ato ny nmahazo fanazavana misimisy kokoa momba izany ato amn'ity rohy ity: https://blog.ipleaders.in/laws-child-marriage-india/)
- Miresaka mikasika ny zava-baovao ankafizina eny anaty tambajotra Indiana “PublicGyan” i Nitin avy amin'ny “The Acorn” – ( Ny Fifanakalozam-pahaizana Eo Amin'ny Rehetra), izay tsena an-tambajotra mikasika ny faminaniana. Mampifandray amin'ny plugins ho an'ny Blogger, MovableType sy WordPress — izay tsy manome fahafahana ireo blaogera hampiseho ny mombamomba azy ao amin'ny PublicGyan ao amin'ny blaoginy izy.
- Manome podcast tsy tapaka mikasika ireo lohatenim-baovao farany avy ao India i Kamla Bhat.
- Manana ny antsipirihany mikasika ilay fetibe mandritra ny sivy alina sy folo andro i Charu.
- Hadihadian'i Abhi avy ao amin'ny Sepia Mutiny ny fahalalana – ”Mandray anjara amin'ny fampihorohoroana ve ny fanambadiana voalamina?”
- Milaza i Iruvaihudhu fa ny zanakalahin'ny Filohan'i Maldiva, i Mamun A. Gayoom, no mpandimby nosafidiany.
- Manana ny vaovao farany (amin'ny teny Nepaley) mikasika ilay fifandonana ara-politika atrehin'i Nepal ankehitriny ny Samudaya.org
- Mamoaka ny zavatra iray niainan'ny Nepaley Pelaka iray ny United We Blog.
- Amin'ny alalan'ny blaogin'ny tovovavy Pakistaney iray, mahazo vaovao mikasika ilay horohorontany nanana maridrefy 7.6 tao Islamabad sy Rawalpindi miitatra mankany New Delhi ao India, Sri Nagar ao Kashlir, Peshawar sy Lahore ao Pakistana isika.
- Miresaka mikasika ny fomba fijery enina samihafa matetika heno any Andrefana i Sepoy avy amin'ny ”Chapaty Mystery”.
- Manazava ny Ramadan i Shirazi avy ao amin'ny ”Light Within”.
- Adalan’ny boky i Kolombo !
- Ny Majika an'ny Mozika avy amin'ny ‘One One Things’.
- Tahotra… Ny antony sy vokany ao amin'ny Tontolo Manodidina an'i Sri Lanka avy amin'ny Komisiripala.
- Mieritreritra mikasika ny maha-Sri Lankana i Nittewa .